Puntland Oo Sheegtay Inay IGAD iyo UNSOM ku Fashilmeen Xal U Helida Xiisada ka Taagan Tukaraq. – Heemaal News Network
Wada-hadallo lugu raadinnayay in lugu xalliyo xiisada ka taagan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ee u dhaxeysa Puntland iyo Soomaaliland ayaan illaa hadda wax natiijo ah laga gaarin, sida u xaqiijiyay madaxweyne ku-xigeenka Puntland,Cabdixakiim Cabdullaahi Xaaji Cumar (Camay).
” Dabeecadayada Puntland ma aha marnaba inan nabad diidno.. laakin nabadgalyo qoor-qabasho ah dadkan asal uma laha dhaqana uma laha wax horey u dhaceyna ma aha, nabad dhab oo qof waliba dalkiisa iyo dadkiisa uu leeyahay ayaan annagu u qaadan karnaa.” ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo inta ku daray ” IGAD iyo UNSOM waa shaqadooda inay yimaadan hadana baxaan diyaarad qaatan hagana soo noqdaan, waa shirkii labaad .. idin ma oranayo waa fashil, laakin waxaan ku hubaa waxbadan oo la soo kordhiyay inaysan jirin.”
Hadalkan madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa ku soo beehmaya xilli muddo ay isku horfadhiyaan deegaanka Tukaraq ciidamo ka tirsan Soomaaliland iyo Puntland, waxaana saacad walba taagan wal wal laga qabo inuu halkaas dagaal ka dhaco.
Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta Garoowe ku soo dhaweeyay hoggaamiyayaasha dowlad-gobolleedyada,Jubbaland, Koonfurgalbeed iyo Galmudug ayaa sharraxaad ka bixiyay sababta uusan Garoowe u tagin madaxweynaha Hirshabeelle. Cabdiweli Gaas waxa uu sheegay in madaxweynaha […]
Xildhibaanno ka Tirsan Puntland Oo soo bandhigay Qorshe Lagu Doonayo in Dastuurka la Furo.
Puntland waxaa toddobaadyadii u dambeeyay ka taagan hadal heynta ku aaddan inay socdaan isku dayo lagu doonayo in dastuurka maamul-gobolleedka la furo. Xildhibaanno Arabacadii saxaafadda kula hadlay Garoowe ayaa ka digay in dastuurka la furo,iyagoo […]
Madaxwaynaha Maamulka Puntland Oo Magacaabis Cusub Sameeyay.
Madaxweynaha Maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 19 June 2018 xafiiskiisa kasoo saaray wareegto uu ku Magacaabay Garyaqaanka Guud ee Dowladda Puntland Xeer Madaxweyne Lr. 83 June 19 […]